crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Hindiya: Markuu gabowga 60-Jirka uu gabar 6-Jir ah guursado | HimiloNetwork
Hindiya: Markuu gabowga 60-Jirka uu gabar 6-Jir ah guursado
Posted by: Zakariya in Wararka October 13, 2015	0 665 Views
New Delhi (Himilonews) – Dhulkii la oran jiray bar-qaareedka Hindiya oo ka koobnaan jiray dalalka Hindiya, Pakistan, Bangaladesh iyo Nepal, waxaa laga soo tebiyaa sheekooyinka ugu tiiraanyada badan ee laga diiwaan-galiyo hannaan-socodka nololeed ee Aadanaha.
Waxaa la arkay gabar loo guuriyay Ey–halkaas oo afo Bani’aadam ah iyo sey Bahaa’in ah ay guur ku kulmeen. La yaab. Waxaase kaaga sii yaab badan marka aad aragto sawirka kuu muuqda–kaas oo ah madal la isugu guurinayo gabar 6-jir ah iyo gabow 60-jir ah.
Waa caado lagu yaqaan umadaha ka weecda wadada uu Alle u jideeyo Aadanaha. Kuwan iyo kuwa lamidka ah, marka aad joogto Hindiya, hasii fogeysan inaad wax kasii daran la kulanto.
Runtii tani ma ahan xaalad lagu qoslo ama la qaayibo ee waa xaalad laga qaman-dhacoodo. Qof walba oo qalbi saafi ah leh, way dhibaysaa inuu marag-ka-noqdo aragtideeda.
Balse ma ahan Hinduuga oo kaliya umadaha aan Muslimka aheyn ee laga diiwaan-galiyo falalka kasoo horjeeda abuurka bashariyadda iyo baxaalliga Aadanaha.
Kol dhow ayay ku beegneyd markii aroos ay ku kulmeen wiil 16-jir ah iyo waayeel 60-iyo dhowr jirad ah gudaha qaaradda Afrika. Halkaas oo labaduba ku muujiyeen inay liibaan ku dareemayaan falkooda.
Si kastaba, Soomaali badan waxaa ku waajib ah inay nimcada Islaamka Ilaahay in badan ugu shukriyaan. Waayo waa Islaam la’aan waxa ku riixaya marxaladahan dadka aan Muslimiinta aheyn. Islaam la’aantiis, Soomaali badan waxaa hubaal ah inay wax lamid ah ama kasii liita falalkan kusoo if-bixi lahaayeen. Waayo hadda oo ay diinta Islaamka heystaan ayay wali si la mahdin karo uga haqa-beelin macaankeeda.
Previous: Joojinta faafista Islaamka iyo fal-celinta Muslimiinta Yurub
Next: Sheeko sahameed: Faa’iidada xasilka iyo wax dhowrista